Nyocha nke ọnwa | Site na Linux
Survey nke ọnwa
Anyị bipụtara nsonaazụ nke ọnwa gara aga: kedu nke kachasị mma? Anyị na-emeghe ajụjụ ọhụrụ nke ọnwa: Kedu ihe kacha mma bittorrent ahịa maka Linux? Ituli aka vootu!
1 Nsonaazụ nke nyocha gara aga
2 Onwa ohuru a
Nsonaazụ nke nyocha gara aga
Ubuntu: 816 votes (50.34%)
Mint Linux: 215 votes (13.26%)
Arch: 163 votes (10.06%)
Debian: 113 votes (6.97%)
chuck: 81 votes (5%)
Fedora: 75 votes (4.63%)
Ndị ọzọ: 66 votes (4.07%)
OpenSUSE: 51 votes (3.15%)
Linux Puppy: 20 votes (1.23%)
Sabayon: 12 votes (0.74%)
PCLinuxOS: 9 votes (0.56%)
Ọ dị egwu na Ubuntu + Mint + Debian nwetara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke votu ahụ. N'ebe dị mma nke atọ bụ Arch, na-ahapụ Fedora na Mandriva n'azụ. Nsonaazụ na-atọ ụtọ. Kedu ihe ị chere?
Onwa ohuru a
Kasị mma bittorrent ahịa bụ ...Market Research
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Survey nke ọnwa
Daalụ!!!!! Aga m agbali ịdị obere karịa !!
Ubuntu maara nke ọma, ma ọ bụrụ na ị mara ya ahụ nke ọma ma chọọ ịgbanwe, ị gbanwere na Mint ma ọ bụ Debian. Ana m eche ịnwa ịpịpịa na LMDE maka mbugharị n'ọdịnihu, agbalịrị m Fedora ụnyaahụ na echiche mbụ m bụ na m na-ahọrọ Ubuntu. Mandriva, Arch na OpenSuse dikwa na atụmatụ m, na mgbakwunye Pardus. VirtualBox ga-ese anwụrụ!
Zaghachi ka o nweghi
Ekwadoro m debian, na agbanyeghị na ọ nwere ngwugwu ntakịrị ntakịrị, a na-eche nkwụsi ike ahụ, ebe ọ bụ na ihe ndị ahụ dị ịtụnanya na-eme gị na Ubuntu kwụsịrị ime gị n'ihi na ọ bụrụ na xD
M na-eji nnwale na multimedia repos na m bụ onye nzuzu, enweghị nsogbu.
njiko nwalere ya ma odi nma, mana o na ewekwu oge iji kwado ya
Kwesịrị ekwesị asaa ebe «ọzọ», ọ dịghị onye na-ekwu ihe ọ bụla? 😛
Amaghị m banyere gị, mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na nsonaazụ ya ga-abụ nke ndị ọzọ ma ọ bụ na-erughị, ọ bụ ezie na ezigbo ajụjụ nke nyocha a "nke kachasị mma distro" jụrụ ihe ọzọ. You ghọtara ihe m na-aga? O yiri ka ha zara nke bụ ihe kasị ewu ewu….
Enwere m ike ịgwa gị na Ubuntu emeriwo ọtụtụ ihe, ma ọ dịkarịa ala na ahụmịhe m Ubuntu na-arụ ọrụ n'ụzọ dị ebube, ọ naghị ada ada (ọkwa dị elu nke nkwụsi ike sitere na mbipute 10.04), ịwụnye ngwa dị mfe karịa mgbe ọ bụla, ndị ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ 100% na nnukwu nkwado sitere na obodo na-eme ka ndụ dịkwuo mfe. Na 2010 enyere m Mandriva, OpenSUSE na Ubuntu na mụ na Ubuntu na-arapara n'ahụ. Mana ọ dabere n'ụdị onye ọrụ ma ọ bụrụ na Mandriva ma ọ bụ Debian na-arụ ọrụ maka gị, mgbe ahụ ka nke ahụ ga-abụ nkesa kachasị mma n'echiche gị. Ihe dị mkpa bụ na anyị niile na-eji Linux, anyị kwesịrị ịdị na-anya isi na ya. Cheers !!
PS Ọ dị m nwute maka enweghị ngwoolu mana m na-ede site n'ụdị na ọ nwere naanị kiiboodu bekee.
N'ezie. Ihe njirisi iji kọwaa distro kacha mma dị ọtụtụ. Ọ ga-adị mkpa ịtụle ọtụtụ ihe, n'ihi na nke a ga-achọ ọmụmụ miri emi nke nyocha dị mfe enweghị ike ikpuchi. Ma ọ dị mma ma ọ bụrụ na a ghọtara echiche gị. Site n'ụzọ, n'echiche gị, olee nke kacha mma distro? Ma ọ bụ nke kacha baara gị uru kwa ụbọchị?
Lee anya, maka nkasi obi m na-eji Ubuntu, amalitere m ihe dịka 9 afọ gara aga na Slackware na m mụtara etu OS si arụ ọrụ (chọọ ozi site na Slack ị ga-amarakwa ihe mere m ji gwa gị) na distro a.
Mgbe ahụ enwere m webserver / mailserver emere na Debian ma ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu na Pentium II.
Ọ dabere na ojiji enyere ihe ọ bụla, maka ụlọ ọrụ enweghị ihe dịka redhat m chere….
Know maara ihe isiokwu bụ? Echere m na na ubuntu ị naghị amụta Linux n'onwe ya, ị na-amụta ubuntu un. Ma ọ bụrụ na ị ga-ahazi sava na storo na kwuru distro. Na slackware amụrụ m na ọ bụrụ na m chọrọ ịnweta ngwa, m ga-achịkọta ya, chọọ maka ịdabere wdg ... M pụtara, amụrụ m Gnu / linux.
N'oge a enwere m ike ime nke ahụ site na debian, ubuntu na distro ọ bụla ọzọ ... n'ihi na echere m na m mụtara Gnu / Linux ...
Lelee ihe m kwuru na post a: http://usemoslinux.blogspot.com/2011/02/como-usar-siempre-la-ultima-version.html i gha ahu ihe kpatara m ji si na ndi mmadu na-amu ubuntu abughi Linux
Ọ dị m ka ihe ijuanya. Ọ bụ ihe doro anya.
Arch dị ezigbo mma mana ọ bụ oge na-aga ịhazi ihe niile na aka yana nke ahụ ndị ọrụ na-adịghị anya na ya.
N'ezie, m zitere a pụtara ogologo ikwu ma ọ bipụtara, ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ?
ekele na ịmakụ !!!
Alex ọ dịghị onye kwuru n'ụzọ ọzọ, n'ezie ị na-ahọrọ distro nke kachasị gị mma, mana n'ihi na ọ kachasị mma ọ pụtaghị na ọ kachasị mma.
Lee na Window $, ihe niile na-esote, na-esote ma ị nwere ya na-arụ ọrụ ma ọ dị nwute na ọ bụ OS kachasị ewu ewu, gịnị kpatara ya? maka mma ... ọ bụghị n'ihi na ọ ka mma ma anyị niile maara na ...
Aghọtara m echiche m? M na-eche ugbu a ma ọ bụrụ na m kwesịrị ịghọta
Ehe, etinyere m akwụkwọ, chịkọta maka ịdabere na ya ma gwọọ ihe na - eme n'azụ windo nke Ubuntu m, ebe m mụtara ya. Aghọtara m na n'ụzọ distro na-eme ka ndị mmadụ dị umengwụ mana kwere m, ọ dabere na mkpali onye ọ bụla mụtara karịa na distro ha na-eji. Ugbu a ikwuru slackware, m ga - agbali ya n'ihi na achoro m inwale ihe ohuru.
Daalụ maka njikọ ahụ.Ga m agụ ya n'oge na-adịghị anya.
Ndị enyi m chere na ihe anyị niile kwenyere bụ na njikwa ma ọ bụ ọnụ yana ederede ya dị ka abụ nke usoro GNU / Linux
Mario Fajardo, kedu ka ị nụbeghị maka Linux Mint?
M na-akpọ Ubunteros niile òkù ịnwale Linux Mint maka ụbọchị ole na ole !!!
Mmiri ara ehi ahụ, ọ bụrụ na ajụjụ a bụ ihe distro ị na-eji, ọ dị mma, mana 50% na-ekwu na distro kachasị mma bụ Ubuntu, o doro anya na ha anwalebeghị. Ejirila m Ubuntu (ogologo oge), Slackware, Debian, na Arch.
Ugbu a, m na Arch na-enweghị obi abụọ.
Ana m anwale Arch na enwere m mmasị na ya ...
Anaghị m agọnahụ eziokwu ahụ na ụfọdụ oge ụfọdụ ihe anaghị arụ ọrụ ma ọlị. Enwere m nsogbu na kaadị ntanetị m na-enweghị eriri na ụdị ochie nke Ubuntu, mana ndị mmepe na-arụsi ọrụ ike iji melite akụkụ ndị ahụ, yabụ taa, m nwere ike ịgwa gị na ihe niile n'okpuru Ubuntu na-arụ ọrụ 100% maka m. nchịkọta ndị mmadụ na-ewepụ enweghị nsogbu ọ bụla agbanyeghị na enwere ọtụtụ akwụkwọ gbasara ya. Dịka ọmụmaatụ, enweghị m mmasị na mmalite na m na-enye ya "sudo purge" mgbe niile wee jiri thunderbird dochie ya. You ga-emezigharị "oghere" ahụ fọdụrụ mana ọ dị mfe ịchọta enyemaka. Banyere ihe ndị na-esonụ, mechaa. Ọ bụ ezie na nke a na-abịa nke kachasị mma iji mee ka ndụ dịrị ndị ọhụrụ mfe, a ka nwere ndị nkasi obi maka anyị ndị na-enwe mmasị ịde ihe. Ihe ndị a bụ naanị nhọrọ maka ndị chọrọ iji ya, ejikwala ya ma ọ bụrụ na ị masịghị ya.
Ma anyị ga-adaba na otu ihe bụ otu esi ahọrọ ụgbọ ala pụtara ma ọ bụ nke akpaka, onye ọ bụla na-ahọrọ nke kachasị amasị ya. ekele !!
Ihe m na-eme mkpesa bụ na a na-ezochi ihe njikwa obere oge ọ bụla, mgbe ọ na-ekwesịghị ịdị ka nke ahụ, na mgbakwunye na nke esemokwu nke Ọzọ, Nabata, mechaa. Ka afọ na-aga, Ubuntu nyekwuru m nsogbu, m wee lelee ụzọ ọzọ anya, ihe dị egwu na ụfọdụ ihe na - arụ ọrụ "na igbe" (ikpe gị) na ndị ọzọ anaghị eme ya. otu n'ime 3 na CD bara uru iji dozie nsogbu Windows / Linux (ikpe m). Dika mmadu kwuru, "ebu soda ihe" xD
Ọ ga-abụ maka ihe, nri? xD
N'ihi na enwetala m ihe na-adịghị amasị Ubuntu, mgbe m na-achọkwa ọhụụ ọhụrụ m na-enyochakarị ndị ewepụtara Ubuntu.
Edito: Mgbe m lechara anya, ihe m na-ahụ pere mpe na-amasị m. Wụnye na ihe niile na-arụ ọrụ. Dị ka ihe ndị a maka m ọ jọkarịrị njọ, ọ na-amasị m ịnweta ntakịrị njikwa karịa usoro m nwere, ọ bụ ezie na ọ ga-abụrịrị na ndị mụrụ m nwere nnukwu nsogbu. Dabere na Debian na Ubuntu: Ọ bụrụ na ọ bụ Debian enweghị m nsogbu ọ bụla (belụsọ ikekwe maka ngwugwu ndị na-adịkarị obere oge iji nyekwuo nkwụsi ike) mana ọ bụrụ na ị gwa m Ubuntu ... na "njikwa ihe ngwanrọ" na-akwụsị apt-get abụghị ọbụna isi nke iji ya tụnyere Ubuntu, ọ dị ka ọ ga-akachasị mma, mana ọ masịghị m n'echiche na ọ dabere na Ubuntu. Ahụmahụ ọjọọ m na ya, xD
Ọbụna m ga-anwa anwa ikwu na uri ndị a na-arụ ọrụ ebube.
Ubuntu na Debian na-ewere ntuli aka nkịtị. Gịnị ma ọ bụrụ na agụghị m ihe ọ bụla gbasara Mint, aga m enyocha ya. Ọ na-eju m anya na Arch nọ na 3rd ebe, ọ dị oke mkpa. Ewezuga Arch, mmasị ndị ọrụ dabara m nke ọma.
Aurvote ma ọ bụ otu esi votu maka nchịkọta nchekwa AUR